ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: November 2007
ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတွေထဲက အကြိုက်တွေ့မိတဲ့တစ်ပုဒ်ပါ ...။
သူငယ်ချင်းခွန်မြလှိုင်... က ကျောင်းကင်တင်းမှာထိုင်နေတုန်း Discovery Channel မှာ သူကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ပင်ဂွင်းငှက်တွေအကြောင်းကို ပြောပြတာနဲ့ ကျွန်တော်လဲ သူပြောတာလေးတွေကို အခြေခံပြီး အတွေးနယ်ချဲ့ခဲ့ရာကနေ ဒီဝတ္ထုတိုလေးဖြစ်လာခဲ့တာပါ ...။ သူငယ်ချင်းခွန်မြလှိုင်ကိုလဲ ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကရေးခဲ့ဖူးတဲ့ စာတွေကိုပြန်ဖတ်ရတိုင်း ... အခု အဲဒီ့လိုမရေးနိုင်တော့တဲ့ ကို့ကိုယ်ကို အာ:မလို အားမရဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေကို ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ် ...။ အရင်အချိန်တုန်းက နေဘုန်းလတ်ကို အခု နေဘုန်းလတ်က ပြန်လွမ်းနေရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပေါ့ဗျာ ...။
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့် အနားမှာ ပင်ဂွင်းငှက်တွေ...။ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာလည်းရေခဲတုံး တွေ ပေါလော မျောနေတဲ့ သမုဒ္ဒရာကြီး...။ ကျွန်တော်ရှိနေတာက အတော်အသင့်ကြီးတဲ့ ရေခဲလွှာကြီး တစ်ခုအပေါ်မှာ...။ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့သလဲ...။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကျွန်တော် ဒီနေရာကို ရောက်နေ ရတာလဲ...။စဉ်းစားကြည့်ပေမယ့်... ခေါင်းထဲမှာ ရှုပ်ထွေး နောက်ကျိ လာတာကလွဲလို့ ဘာမှအစဖော်လို့ မရတော့ဘူး။
ကျွန်တော်မတ်တပ်ထရပ်လိုက်တယ်...။ အနားမှာဝိုင်းအုံ နေတဲ့ ပင်ဂွင်းငှက်တွေ အဝေးကိုနဲနဲရှဲ သွားကြတယ်။ထူးတော့ထူး ဆန်းတယ်...။ ရေခဲပြင်ပေါ်ရပ်နေပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ခြေဖ၀ါးက ဘယ်လို အေးမြမှု ကိုမှမခံစားရဘူး။ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲလို့ ကျွန်တော် စဉ်းစားနေတုန်းမှာ...။
ပင်ဂွင်းငှက်တစ်ကောင်ကပြောတဲ့စကားကို ပထမဦးဆုံးကြားဖူးတဲ့လူသားဟာကျွန်တော်ပဲဖြစ်လိမ့် မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော်အံ့သြသွားသင့်ပေမယ့် ဘယ်လိုမှမခံစားလိုက်ရဘူး။ ကျွန်တော် သူတို့အားလုံးကို ခေါင်းညိတ် ပြလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ဆီက တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရပြီးတာနဲ့ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို ဂရုမစိုက် တော့ပဲ တဘက်ကို လှည့်သွားကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ အတောင်ပံ တိုနံ့နံ့လေးတွေကို နောက်ကနေကြည့်ရင်း သူတို့ကို ကျွန်တော် အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားတာနဲ့ သူတို့အားလုံးကြားရအောင် ကျွန်တော် လှမ်းပြော လိုက် မိတယ်။
`ခင်ဗျားတို့လည်း အတောင်ပံရှိရက်သားနဲ့ မပျံနိုင်တဲ့ ငှက်တစ်မျိုးပဲနော်...´
ကျွန်တော့်ရဲ့ စကားကိုကြားတော့ သူတို့တွေ ကျွန်တော့် ဘက် ကို ပြန်လှည့်လာကြတယ်။ပြီးတော့ သူတို့ထဲက အသက်အကြီးဆုံး လို့ ထင်ရတဲ့ ပင်ဂွင်းကြီးကပြောတယ်။
`ငါတို့က သဘာဝအလျှောက် မပျံနိုင်ကြတာပဲကွာ ၀မ်းနည်း စရာ မရှိပါဘူး။´
သူက စကားကိုမဆက်သေးပဲ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေထဲကို စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော့် မျက်လုံး တွေထဲမှာ ဘယ်လိုအရိပ်အရောင်တွေ သူတွေ့သွားတယ် မသိပါဘူး။
`သဘာဝအလျှောက် မဟုတ်ပဲ ကောင်းကင်ကိုဆွဲပိတ်ခံထားရလို့ ဒါမှမဟုတ် အတောင်ပံတွေ မသန် စွမ်းလို့ မပျံသန်းနိုင်ကြတာဆိုရင်တော့ သိပ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာပေါ့ကွာ။´
သူ့ရဲ့စကားကြောင့် ကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်။ မချိပြုံးလို့ အမည်တပ်မယ်ဆိုရင် တပ်လို့ရတဲ့ အပြုံးမျိုး ပေါ့။ အဲဒီနောက် သူတို့ဟာ ကျွန်တော်ရှိနေတာကို ဂရုမစိုက်ကြတော့ပဲ ရေခဲပြင်ရဲ့ အလယ်တည့်တည့်မှာ စက်ဝိုင်းပုံစံ စုပြုံလိုက်ကြတယ်။
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတဲ့ နေရာဒေ သတစ်ခုက တစ်ခါမှမဆုံဖူးတဲ့ သူတို့ကို စိတ်ဝင် တစား ငေးကြည့်နေမိတယ်။ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းတယ်။ သူတို့က အားလုံးငြိမ်ပြီး စုပြုံနေကြတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ခဏခဏတိုင်းမှာ အပြင်ဘက်ဆုံးကကောင်တွေက ဟိုးအတွင်းဘက်ဆုံးကိုဝင်သွားလိုက် အတွင်း ဘက်ဆုံးက ကောင်တွေက နောက်ကို တစ်တန်းချင်း ဆုတ်လာလိုက်နဲ့ နေရာချင်း အလဲအလှယ် လုပ်နေ ကြတယ်...။
ကျွန်တော့်ရဲ့သိချင်စိတ်က ဘယ်လိုမှ ထိမ်းလို့မရတော့ဘူး...။အဲဒါနဲ့ အပြင်ဘက်ဆုံးက အကောင် တစ်ကောင်ကို ကျွန်တော်လှမ်းမေးလိုက်တယ်။
`ခင်ဗျားတို့... အဲဒါ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ။´
သူကစိတ်မရှည်တဲ့လေသံနဲ့ ကျွန်တော့်ကို အဖြေပေးတယ်။
`ချမ်းတာနဲ့ ခင်ဗျားတို့အထဲကကောင်က အပြင်ထွက်လိုက် အပြင်ကကောင်က အထဲဝင်လိုက်လုပ်နေ တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ...´
`မင်းက တော်တော် ဒုံးဝေးတာပဲ...။အတွင်းဆုံးကကောင်က အဒီဲမှာအမြဲနေရင် သူတစ်ယောက်ထဲ အနွေးထွေးဆုံး ဖြစ်နေမှာပေါ့ကွ အဲဒီတော့ တရားမျှတမှုရှိအောင် အလှည့်ကျ နေရာပြောင်းနေကြတာပေါ့... ဒါတောင် နားမလည်ဘူးလား...။´
သူပြောလည်းပြောစရာပါပဲ...။ဒီလောက်ရိုးရှင်းတဲ့ သဘောတရားလေးတစ်ခုကိုတောင် ကျွန်တော် ဘာဖြစ်လို့ မစဉ်းစားမိခဲ့ရတာလဲ...။ တကယ်တမ်းဆို ကျွန်တော်က လူလေ...။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသိဥာဏ်အမြင့်မားဆုံး သတ္တ၀ါလေ...။ကျွန်တော်ကသူတို့ထက်ပိုပြီး ဒါတွေကိုနားလည်သင့်တာပေါ့ ...နားလည်ရမှာပေါ့။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ...။ ကျွန်တော့်အတွေးတွေ ယောက်ယက်ခတ်နေတုန်း ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ဟာ တခါက ကျင်လည်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူ့လောကထဲကို ပြန်ရောက်သွားတယ်...။
ကျွန်တော်တို့တွေကသာအနွေးထွေးဆုံး အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေကို တွေ့ကြုံခံစားနေရပြီ ဆိုရင် ဟိုးအတွင်းဆုံးက ပင်ဂွင်းငှက်တွေလို နောက်ကို တစ်လှမ်းဆုတ်ပေးပြီး သူတပါးကိုဝင်ရောက်ခံစားခွင့်ပေးဖို့ စိတ်ကူးရှိပါ့မလား...။မသေချာဘူး...။ အကယ်၍ စိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် သူတပါးကို ခဏနေရာဖယ်ပေးလိုက်ဖို့အထိကျွန်တော်တို့ သတ္တိရှိပါ့မလား။ ကိုကိုယ်တိုင်က နေရာဖယ်ပေးဖို့နေနေသာသာ ကံကြမ္မာအရ အလိုအလျောက် နေရာအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခဲ့ကြရင်တောင် အဲ အခြေအနေကို ဘယ်သူတွေက တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ကြလို့လဲ...။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပင်ဂွင်းငှက်တွေ လောက်တောင် ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိသေးပါလား။ မျိုးနွယ်တူအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီရင်းက ဒုက္ခနဲ့ သုခကို အညီအမျှ မျှဝေခံစားကြမယ်လို့ ပင်ဂွင်းငှက်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ထားနိုင်ကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေကရော အဲဒီ့လိုစိတ်မျိုး ထားနိုင်ကြပါ့မလား။ ထားဖို့ရော စိတ်ကူးရှိပါ့မလား...။ ထားသင့်တယ်ဆိုတာကိုရော နားလည်ကြရဲ့လား...။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေပင်ဂွင်းငှက်တွေ လောက်တောင် မမြင့်မြတ်ကြတော့ပါလား...။
အဲဒီလိုစဉ်းစားမိတော့ ... ပထမဆုံးအကြိမ် ကျွန်တော် ရှက်သွားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေ ဒီကိစ္စကိုမလုပ်ချင်ပဲနဲ့များ မကျေမနပ်နဲ့ လုပ်နေကြတာလားလို့ကျွန်တော် သံသယ ၀င်မိတယ်။ အဲဒါကြောင့်... ကျွန်တော်နောက်တစ်ခွန်းထပ်မေးမယ်အလုပ်မှာခုဏကအပြင်ဘက်ဆုံးမှာ အအေးဒါဏ်ကို အများဆုံး ခံစားနေရတဲ့ တစ်ကောင်ဟာ အတွင်းဘက်ဆုံးကို ၀င်သွားပါပြီ။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း နောက်တစ်ကောင်ကိုပဲ ထပ်မေးလိုက်တယ်။
`ခင်ဗျားတို့ အဲဒီလိုလုပ်နေတော့ ... အထဲကနေပြီး အပြင်ကိုပြန်ပြန်ထွက်လာရတဲ့ သူတွေက မကျေမနပ်မဖြစ်ကြဘူးလား...´
ကျွန်တော်ရဲ့မေးခွန်းကို သူက အံ့သြဟန်ပြပြီးပြန်ဖြေတယ်။
`ဘာမှမကျေမနပ်ဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး။ အချင်းချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားနိုင်ရင် အားလုံးပြီးပါတယ်။ နောက်ပြီး...ဒီအနေအထားကတကယ့်ကိုစနစ်ကျတဲ့လည်ပတ်မှုတစ်ခုပဲလေ...။အားလုံးညီတူညီမျှပဲ...။ဘယ်သူမှပိုပြီးခံစားခွင့်မရှိသလို...ဘယ်သူမှလည်းလျှော့ပြီးခံစားစရာမလိုဘူး။စေတနာအရ အသက်အရွယ် ကြီးသူတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အတွင်းမှာ အချိန် နည်းနည်းကြာကြာနေခွင့် ပေးကြတာကလွဲလို့ပေါ့...။´
တိရစ္ဆာန်တွေ ဖြစ်ပေမယ့်သိတတ်လိုက်တာဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကျွန်တော်ကြည်နူးသွားမိတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှက်စိတ်တွေဝင်လာပြီး ကျွန်တော် မလုံမလဲတွေဖြစ်လာတယ်။ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ အံ့သြငေးမောနေမိတဲ့ ကျွန်တော်ကိုသူကအထူးအဆန်း သတ္တ၀ါတစ်ကောင်လို ကြည့်ရင်းပြောတယ်။
`မင်းအတွက် ဘာဖြစ်လို့အဲဒီ့လောက် ဆန်းပြားနေရတာလဲ...။ ဒါဟာ... သဘာဝတရားပဲလေ ဖြူစင်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့အစစအရာရာကိုရိုးရိုးလေးစဉ်းစားပြီးသဘာဝအတိုင်းလိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် နေလိုက်တာပဲလေ ။ ထူးလည်း မထူးသလို... ဆန်းလည်း မဆန်းပါဘူး ...။´
သူကကျွန်တော် ကိုသေသေချာချာရှင်းပြ နေပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ရှက်စိတ်နဲ့ ခေါင်းကိုငုံ့ထားမိတယ် ။ကျွန်တော်ရဲ့နားထဲမှာလည်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ တရားမျှတမှု၊ စေတနာ၊ သဘာဝတရား ...ဆိုတဲ့အသံတွေ ကျယ်လောင်စွာမြည်ဟည်းနေကြတယ်။
ဟုတ်တယ်...သူပြောတာဟုတ်တယ်။ ဖြူစင်တဲ့ စိတ်တစ်ခုရှိရမယ်။ အားလုံးကို ရိုးရိုးလေး စဉ်းစားရမယ်။ နောက်ပြီး... သဘာဝနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေရမယ်။လွယ်လွယ်လေးပါ...။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စတွေက လူတွေအတွက်ဘာကြောင့်များ အရမ်းခက်နေရတာလဲ...။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကရော ဘာဖြစ်လို့အပြည့်အ၀ မကျင့်သုံးနိုင်ရတာလဲ..။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ...ကြိုးစားကြည့်ရမှာပေါ့...။ ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေ အနည်းငယ် ကြည်လင်စပြုလာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပင်ဂွင်းငှက် တွေဟာ အအေးဓာတ်လျော့ကျသွားလို့ထင်ရဲ့ ရေကူးသူကူး၊ ငါးဖမ်းသူဖမ်းနဲ့ ရေခဲပြင်တစ်ခုလုံး လှုပ်ရှားစည်ကားသွားတယ်။ တချို့တွေက ရေထဲမဆင်းကြဘူး ဘယ်ကိုမှလည်း မရွေ့လျားကြဘဲ တစ်နေရာတည်းမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးရပ်နေကြတယ်။
`ခင်ဗျားတို့က ရေထဲမဆင်းပဲ ဒီအနားမှာ ဘာရပ်လုပ်နေကြတာလဲ...´
ကျွန်တော်သွားမေးကြည့်လိုက်တော့သူတို့က သူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ပင်ဂွင်းငှက်ဥတွေကို မေးငေါ့ပြတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော်လည်း သတိထားမိတယ်...။ ဟုတ်တယ်... သူတို့က သူတို့ရဲ့ဥတွေကို ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပေါ်မှာညှပ်ပြီး တင်ထားကြတယ်။ ဟိုဟိုဒီဒီ သွားချင်ရင်တောင် ဥတွေကျကွဲမှာစိုးလို့ ဖြေးဖြေးလေးသွားကြရတယ်။ သူတို့ရဲ့ သားသမီးကလေးတွေကို ပင်ဂွင်းငှက်အမတွေက ရင်နဲ့လွယ်ပြီးတဲ့နောက် ပင်ဂွင်းငှက်အဖို တွေက ခြေနဲ့ သယ်ထားကြတယ်။
`ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို လုပ်ထားရတာလည်း... အသိုက်ထဲမှာ သူ့ဖာသာသူ နေပါစေလား´
သစ်ပင်ပေါ်ကအသိုက်တွေထဲမှာ ဥ ဥလေ့ရှိတဲ့ ငှက်တွေကိုသာ မြင်ဖူးတဲ့ ကျွန်တော်က အဲဒီလို မေးလိုက်တော့ ...
`ဒီလောက်ရေခဲတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ နေရာမှာ ဘာနဲ့အသိုက်သွားဆောက်လို့ရမလဲကွ ၊ ဆောက်ချင်ရင်ရေခဲသိုက်ပဲ ရမှာပေါ့´
`အဲဒါဆိုလည်း အဲဒီရေခဲသိုက်ထဲမှာပဲ လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းထားပေါ့ဗျ။´
ကျွန်တော်ရဲ့ ထပ်ဆင့်အပြောကြောင့် သူ့မျက်နှာ ရှုံ့တွသွားတယ်။ ကျွန်တော့်ကို တော်တော် စိတ်ပျက်သွားပုံပဲ...။
`မင်းတော်တော် တုံးတဲ့ကောင်ပဲ ...´
လာပြန်ပြီ ...ဒီစကား။ပင်ဂွင်းငှက်တွေက ကျွန်တော့်ကို အသုံးမကျဘူးလို့ပြောတာ နှစ်ခါတောင်
ရှိသွားပြီ။ သူတို့ပြောတာက ဟုတ်နေတော့လည်း ကျွန်တော် အောင့်သက်သက်နဲ့ ငြိမ်ခံနေရတယ် သူက
`တချို့အရာတွေက လုံခြုံအောင်သိမ်းဆည်းထားလေ ဆုံးရှုံးသွားဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူလေပဲကွ...။ဒီဥတွေကို ရေခဲတွေထဲမှာ သိမ်းထားမယ်ဆိုရင် အနွေးဓါတ်မရပဲ အားလုံးခဲပြီး ပျက်စီးကုန်ကြလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် အနွေးဓါတ်ရအောင် အကောင်ပေါက်လာတဲ့အထိ အခုလို ခြေထောက်ပေါ်မှာ တင်ထားရတယ်ကွ...။´
`ကိုယ့်သားသမီးအတွက်ပဲ ဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလောက်တော့အပင်ပန်းခံရမှာပေါ့...။´
သူ့စကားကမဆုံးသေးပါဘူး။ မိဘမေတ္တာတွေ ၊ဖခင်ဝတ္တရားတွေ ၊ အကြင်နာတရားတွေ စတဲ့ စကားလုံးတွေသုံးပြီး သူဆက်ပြောနေဆဲပါ...။ ကျွန်တော့်မှာတော့ သူ့စကားတွေကို ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်နဲ့ အတွေးတွေ ၀ဲဂယက်ထန်နေခဲ့တယ်။
လူ့လောကထဲက အဖေမဖော်နိုင်ပဲမွေးခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေ၊ မိဘရဲ့ရင်ခွင်ကိုစောင့်ကြို ငံ့လင့် နေကြရတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာက ကလေးတွေ၊ လူ့အဖြစ်ကိုတောင် လုံးလုံးလျားလျား ရောက်ရှိခွင့်မရခဲ့ကြရှာတဲ့ အဖျက်ဆီးခံ သန္ဓေသားလေးတွေ... နောက်... မိခင်၊ ဖခင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးနက်မှုကို အပြည့်အ၀နားမလည်ကြတဲ့၊ နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိကြတဲ့ ယောင်္ကျား၊ မိန်းမတွေ ...ပုံရိပ်တွေ ... မြင်ကွင်းတွေ ... ကျွန်တော် လူသားတွေကိုယ်စား ရှက်လိုက်တာ။
ဦးနှောက်ထဲမှာ အတွေးတွေ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေရင်း ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းတွေ မူးနောက်လာတယ်။ နားထင်စပ်နားက ထိုးထိုးပြီးအောင့် လာတယ်။
ဦးခေါင်းကို လက်နဲ့ အုပ်ကိုင်ရင်းကျွန်တော် လဲကျသွားတယ်။
`သား ...သားလေး သတိရပြီလား။´
ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်သတိပြန်ရချိန် မှာတော့ မေမေ့ရဲ့အသံကို ပထမဆုံး စကြားရတယ်။ မျက်စိကို အားယူပြီးဖွင့် ကြည့်လိုက်တော့ မျက်စိရှေ့မှာမျက်နှာကျက်ဖြူဖြူတွေ...။ကျွန်တော် တဖြည်းဖြည်းနဲ့
အားလုံးကို ပြန်သတိရလာတယ်...။ကျွန်တော်တို့သင်္ဘော မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကို အဖြတ်မှာ ရေခဲတုံးကြီး
တစ်ခုနဲ့တိုက်မိပြီး သင်္ဘော မြုပ်သွားတယ်။အဲဒီမှာ ကျွန်တော်က...ကျွန်တော်က ပင်ဂွင်းငှက်တွေဆီ ရောက်သွားတာလား...။
`အမေ ... သားကို ဘယ်နေရာကနေ ပြန်ခေါ်လာတာလဲဟင်´
သူတို့ ကျွန်တော့်ကို ပင်ဂွင်းငှက်တွေရှိတဲ့ ရေခဲပြင်ကြီးပေါ်ကနေများ ပြန်ခေါ်လာခဲ့ကြတာလား...။ ဒါမှမဟုတ်...
`သားတို့သင်္ဘောမြုပ်ပြီး မကြာမီမှာပဲ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရောက်လာပြီး သားနဲ့အတူ သင်္ဘောသား သုံးယောက်ကိုကယ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်တဲ့...။အဲဒီ့သုံးယောက်ကတော့ အခုကျန်းကျန်းမာမာ ဖြစ်နေကြပြီ သားကသာ လုံးဝ သတိပြန်လည်မလာတာ ဒီနေ့ပါနဲ့ဆိုငါးရက်တောင် ရှိနေပြီ...။´
မေမေ အဲဒီလို ပြောတော့ ကျွန်တော် အရမ်းအံ့သြသွားတယ်...။မေမေ့ရဲ့စကားအရဆိုရင် ကျွန်တော် ပင်ဂွင်းငှက်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာကဘာလဲ...။အိပ်မက်တစ်ခုလား ...။ မဖြစ်နိုင်ဘူး...။ကျွန်တော် အိပ်ပျော်နေတာမှမဟုတ်တာ...။ဒါဆို...ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ...။စဉ်းစားနေရင်း ခေါင်းထဲမှာမူးနောက်လာတယ်...။ ဆက်စဉ်းစားလို့ မဖြစ်တော့ပါဘူး...။ ကျွန်တော် အားလုံးကို ခဏမေ့ထားလိုက်တယ်...။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ဟာ လူ့လောကထဲမှာ ကျင်လည်လှုပ်ရှား နေပေမယ့် အံချော်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်သာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ လူသားမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားချင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် အရူးလို့ပဲ အခေါ်ခံခဲ့ရတယ်။
အဲဒီလို အဲဒီလိုနဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုရဲ့အလွန်မှာ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေ ခိုင်မာပြင်းပျတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခု လျှံထွက်ကျလာတတ်တယ်...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Sunday, November 11, 20077comments:
နားလည်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တွေမှာ အင်မတန်မှကိုအရေးပါပါတယ်။ မိဘနဲ့သားသမီး ဆက်ဆံရေးမှာလည်း ဒီနားလည်မှုဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာတွေ ရှိနေပါတယ်။မိဘတိုင်း မိဘတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေကို အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးချင်တဲ့ စိတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ စိတ်ရှိသလိုပဲ ... မိဘတွေဟာပေးဆပ်မှုတွေအထပ်ထပ်နဲ. သူတို.သားသမီးတွေရဲ့ဘ၀ကိုအစွမ်းကုန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ... လွဲချော်မှု တစ်ချို့တစ်ဝက်နဲ့အတူ ... မိဘတွေရဲ့အထောက်အပံ့တွေ၊ ပံ့ပိုးပေးမှုတွေဟာအရာမရောက် ဖြစ်သွားရတာမျိုးတွေရှိလာပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို.ပါလဲ ... မိဘတွေအနေနဲ့ သူတိုရဲ. ကလေးတွေ ဘာကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကို နားလည်သဘောမပေါက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ အလျှံအပယ်နဲ့ မိဘမေတ္တာငတ်နေကြရရှာတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့ ကစားစရာတွေ အပုံအပင်ရဲ့ အလယ်မှာ မိဘတွေရဲ့အိမ်ပြန်အလာကို စောင့်မျှော်နေကြရရှာတဲ့ကလေးငယ်တွေ၊ အိစက်ညက်ညောတဲ့ ဖဲမွေ့ယာကြီးပေါ်မှာ မိဘတွေပြောပြမယ့် အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေကို မျှော်လင့်နေကြရတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ... လောကကြီးထဲမှာ ဒီလိုပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရခြင်းဟာ မိဘတွေနဲ့ သားသမီးတွေကြားက နားလည်မှုလွဲချော်ခြင်းတွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေပါပဲ။ ဖြည့်ဆည်းပေးမှုတွေ ဘယ်လောက်ပဲများများ ... အဲဒါတွေဟာလိုအပ်မှုတွေနဲ့ ထပ်တူကျမနေဘူးဆိုရင် ... ဒါတွေဟာဘာမှ အရာမရောက်တဲ့အပိုစာသားတွေပဲဖြစ်နေမှာပါ။
'Without understanding of their children's needs, parents can't effectively support their children'
အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ကလေးငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ထဲမှာမဖြစ်မနေရှိနေသင့်တဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေရှိပါတယ် ... အဲဒါတွေကတော့ ... ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယ၊ ယုံကြည်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုမှု၊ အကြင်နာတရား စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးစိတ်အခြေအနေတွေကို ကလေးတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာကလည်း မိဘတွေမှာအများ ကြီးတာဝန်ရှိပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီး ဆုံးမပဲ့ပြင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဆူပူအော်ငေါက်နေတာမျိုးတွေ၊ ကြိမ်းမောင်းရိုက်နှက် တာမျိုးတွေဟာ ကလေးငယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲက အကြင်နာတရားတွေကိုလျော့ပါးလာစေပါတယ်။ နောက်ပြီး ... ကလေးငယ်တွေရဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေတိုင်းကို တားမြစ်နှိပ်ကွပ်နေခြင်းမျိုးကိုလည်း မိဘတွေအနေနဲ့ ရှောင်ကျဉ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော၊ ဘာပဲတောင်းတောင်း လိုက်လျောခံရခြင်းမရှိတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု လျော့နည်းလာတတ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုဟာ အမှန်တကယ်လိုက်လျှောဖြည့်ဆည်း ပေးဖို့မသင့်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်နေရင်လဲ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကိုထိခိုက်မှုမဖြစ်စေပဲငြင်းပယ် နိုင်အောင်မိဘတွေအနေနဲ့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ မိဘတွေဘက်က ကြည့်ရင်တော့ စိုးရိမ်လို့ချစ်လွန်းလို့ ချုပ်ခြယ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ပေမယ့် ... ကလေးငယ်တွေဘက်က ကြည့်ရင်တော့ ဘ၀မှာလိုအပ်တဲ့အချို့စိတ်အခြေအနေတွေကို ဆုံးရှုံးစေပါတယ်။ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဘောလုံးကန်ချင်တဲ့ ကလေးငယ်ကိုအိမ်ထဲမှာပဲ ဂိမ်းထိုင်ဆော့ဖို့ပြောတတ်တဲ့မိဘတွေရှိပါတယ် ... အန္တရာယ်သိပ်မရှိဘူးဆိုရင် ဒါမျိုးကိုခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ဒီကလေးငယ်ဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အင်အားနဲ့ ပြိုင်ဘက်ရဲ့အရေးပါမှုတွေကို သိနိုင်ဖို့ခဲယဉ်းသွားပါလိမ့်မယ်။
'Nurturing and not breakingachild's will is the basis of creating confidence, cooperation and compassion in children.'
ကလေးငယ်တွေဟာ အရာရာကိုစူးစမ်းချင်ကြတယ်။ ဘာကိုမဆို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်ချင်ကြတယ်။ လောကထဲမှာအနေကြာပြီး လူဝါးဝနေပြီးသား လူကြီးတွေတောင် အမှားအယွင်းတွေနဲ့မကင်းနိုင်ဘူး ဆိုရင် ... ကလေးငယ်တွေ ဆိုရင်တော့ ခဏခဏမှားကြမှာ အသေအချာပါပဲ။ ကလေးငယ်တွေ အမှားအယွင်းတစ်ခုခု ကိုလုပ်မိတဲ့အခါ ... မိဘအများစုက ဘာတွေ လုပ်တတ်ပါသလဲ။ တော်တော်များများကတော့ရိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စေ၊ ဆူပူအော်ဟစ်ပြီးဖြစ်စေ ဒီအမှားအယွင်းကို နောက်တစ်ခါ မလုပ်အောင်တားမြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါမျိုးလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကလေးငယ်နေနဲ့ ဒီလို အမှားအယွင်းမျိုးကို နောက်တစ်ခါ ထပ်လုပ်တော့မှာမဟုတ်ပေမဲ့ ဒါဟာအမှားအယွင်းကို သေသေချာချာ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး နောက်ထက်မလုပ်ချင်တော့တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ... မိဘကိုကြောက်လို့၊ အဆူခံရမှာစိုးရိမ်လို့ မလုပ်တော့တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီစောင့်ထိန်းမှုမျိုးဟာ ကြာရှည်ခံပါ့မလား ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးငယ်တွေကို သူတို့ရဲ့မှားယွင်းမှုအတွက် ကြောက်သွားတာမျိုး၊ စိတ်ထိခိုက် သွားတာမျိုး စတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဖြစ်စေဖို့သင်ပေးမယ့်အစား သူတို့ရဲ့ အမှားတွေကနေ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်သင်ယူ လာနိုင်အောင်လမ်းကြောင်းပေးသင့်ပါတယ်။
'In stead of teaching our children to feel bad for their mistakes, we need to teach them to learn from their mistakes.'
မှားတယ် ... အမှားကိုမြင်တယ် ... အဲဒီ့အတွက်အမှန်ကိုရဖို့ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပြင်ယူတယ်။ ဒီအဆင့်တွေကို ကလေးဘ၀မှာ အများကြီး ကြုံရမှာပါ။ မိဘတွေအနေနဲ့က မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေမှားတယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ထားပြီး ကလေးငယ်တွေ အမှားကိုမြင်လာစေဖို့ ... အမှန်ကိုကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပြင်ယူနိုင်စေဖို့ဆိုတဲ့ အဆင့်တွေအတွက် ဆုံးမသွန်သင်တာမျိုး၊ နည်းပေးလမ်းပြ တာမျိုးတွေကို လုပ်ပေးဖို့သာလိုပါတယ်။ မိဘအများစုဟာ ကလေးငယ်တွေကိုမှားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မှာတင် အပြစ်ပေးတာမျိုး၊ ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာမျိုးတွေလုပ်လိုက်တဲ့အတွက် နောက်ကအဆင့်တွေကို ကလေးငယ်တွေ မရတော့ပဲ နောက်တစ်ခါထပ်မှားမှာကိုကြောက်သွားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကိုသာ ကလေးတွေရသွားရှာပါတယ်။ အင်မတန်မှကိုဆိုးပါတယ်။ ကလေးတွေအနေနဲ့မှားမိမှာကို ကြောက်တဲ့ခံစားချက်တွေကို ခံစားနေရတဲ့အတွက် သဘာဝကပေးတဲ့ အမှန်ကိုမိမိဖာသာပြင်ယူနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေကိုဆုံးရှုံးကြရပါတယ်။
'Children feel afraid of making mistakes, they lose the nature ability to self-correct.'
ကလေးဘ၀ကနေ လူငယ်၊လူငယ်ဘ၀ကနေ လူလတ်၊ လူလတ်ကနေ လူကြီး စသဖြင့်အသက်အရွယ်တွေ ပြောင်းလဲ ကြီးပြင်းလာကြသလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေ၊ အယူအဆတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ၊ အပြုအမူတွေကလည်း ဘ၀တလျှောက်လုံးမှာ လုံလောက်တဲ့ကြောင်းတရားတွေကိုမှီပြီး ပြောင်းလဲဖြစ်တည်နေကြရပါတယ်။ဒါဟာ .....သဘာဝတရားပါ။ ဒါပေမဲ့ ... ကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ ကိုယ့်အတွက်ရော လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပါ လိုလားအပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့် တည့်မတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး မိမိရဲ့ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံတွေကို အမြဲတမ်း သတိတရားနဲ့ စောင့်ကြည့်တည့်မတ်စေနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုးကို ကလေးဘ၀ထဲက ပြုစုပျိုးထောင်ယူထားဖို့လိုပါတယ်။ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ သဘာဝကပေးတဲ့အမှန်ကို မိမိဖာသာပြင်ယူနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်မျိုးကို ကလေးဘ၀ကမှာ မရခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘ၀မှာသင့်မြတ်လျှော်ကန်စွာနဲ့ အောင်မြင်တိုးတက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ကိုဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်။ ဘ၀မှာအောင်မြင်နေကြတဲ့ သူတွေအားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့မှားယွင်းမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်တည့်မတ်နိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေ၊ စိတ်နေသဘောထားတွေ၊ အပြုအမူတွေကိုပါ ပြေပြစ်ဆီလျှော်အောင် ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိကြသူတွေပါ။
'Those who succeed in life are those who can self-correct and change their thinking, attitude or behavior'
သမိုင်းကြောင်းဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ပေါင်းထားတဲ့အချိန်ကာလ အစုအဖွဲ့တစ်ခုပါ။ အခုလက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာရှိနေကြတဲ့ ကလေးငယ်တွေအားလုံးဟာ အနာဂတ်ဆိုတဲ့ ကာလတစ်ခုမှာအရွယ်ရောက်လာကြပြီး ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့ သမိုင်းကို သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ ရေးထွင်းကြမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်း ဒါမှမဟုတ် ကမ္တာလောကကြီးရဲ့ သမိုင်းကြောင်းဟာ ယိုယွင်းဆုတ်ယုတ်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ စိတ်အခြေခံတွေ ကောင်းခဲ့ဖို့ မဖြစ်မနေကို လိုအပ် ပါတယ်။ မိဘတိုင်း စိတ်ဓါတ်တွေမြင့်မားပြီး သားသမီးတိုင်းရဲ့ အနာဂတ်ကိုတင့်တယ်စေနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့် နေမိပါတယ်။
စာကိုး - Children Are From Heaven By John Gray
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Wednesday, November 07, 20075comments:
ကျွန်တော့်ရဲ့အပြုံးတွေ အရင်ကလိုမချိုတော့ဘူး။ နေ့နေ့ညည ကျွန်တော်သောက်သုံးနေရတာက နောင်တဆိုတဲ့ ဆေးခါးခါးတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်။ လိုအပ်တာထက်ပိုတဲ့ သဘာဝလွန်ကွေးညွတ်မှုတွေက ကျွန်တော့် အပြုံးတွေကို အဆိပ်ခတ်သွားတာထင်ရဲ့ ...။ ဝေးလွင့်သွားတဲ့ သံစဉ်ချိုတစ်စကို တမ်းတမ်းတတ ဖြစ်မနေဖို့ အသိစိတ်တွေက ကျွန်တော့်ကိုဝိုင်းဖြောင်းဖျကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ... အရောင်အဆင်းကင်းတဲ့ အဖြူရောင်ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ ကျွန်တော်တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေးလွမ်းတတ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူမှသိမှာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အနာဂတ်တွေကိုကြောက်စိတ်နဲ့ အတိတ်တွေထဲမှာ မှေးအိပ်ချင်နေတဲ့ ကောင်ဖြစ်တယ်။
``ကို ... ငယ့်ကိုလွမ်းနေရင် အသဲပုံလေးကျပါစေဆိုပြီး ဖဲချပ်လေးတွေကိုဆွဲတာ အမြဲတမ်း ဒီမဲမဲလေးတွေပဲ ကျတယ် ... အဲဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဟင် ...´´
စပိတ်တစ်ဖဲချပ်လေးကို ကိုင်ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ တစ်ခါကကြားခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ နှလုံးသားထဲကနေ ၀ဲပျံလွင့်ထွက်ကျလာတယ်။ မလာနဲ့ ... မလာကြနဲ့ ...။ တားမြစ်နေတဲ့ ကြားထဲက သူ့အသံတွေပြန်ကြား၊ သူ့အပြုံးတွေပြန်မြင် ... ... ... ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ခုန်သံတွေ တစ်စစီ ကွဲရှလွင့်စင်သွားကြတယ်။ ကျွန်တော်အနက်ရှိုင်းဆုံးထိုးဆင်းသွားတဲ့စိတ်ကို လိုက်ဖမ်းနေရင်း ၀ပ်ကျင်းတစ်ခုထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့အဖြစ်ကို ပြန်သတိရလိုက်တယ်။ တိုက်ခန်းပေါင်းများစွာမှာ ညတာတွေကိုခွဲခြားကုန်လွန်စေကြတဲ့ သူတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားက သစ္စာဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းတည်း ထပ်ခါထပ်ခါထွက်ကျလာတယ်။ ဘ၀မှာ ကျွန်တော်ပြန်ကောက်တင်ရမှာအရှက်ဆုံး အရာက ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်တယ်။ ရူးရူးမိုက်မိုက်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် စူးစူးစိုက်စိုက်ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အချစ်ဦးကပဲ ကျွန်တော့်ရည်စူးခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေကိုပြန်ခူးသွားတယ်။ ကျွန်တော့်လျှောက်မယ့်လမ်းတွေမှာ ခရေပင်ကြီးတွေ အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းရစ်သိုင်းနေကြပြီ။ အဲဒီခရေပင်ကြီးတွေမှာ ကြွေကျပေးဖို့မစဉ်းစားတဲ့ ခရေတွေကလည်း အပြိုင်းအရိုင်း ဝေနေကြပြီ။ မတောက်တခေါက်အသိဥာဏ်နဲ့ ခြေမြှောက်လက်မြှောက် ဆော့ချင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်မှာ အပြစ်ရှိပါတယ်။
`` မနက်ဖြန်အလုပ်ကပြန်လာရင် မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုသွားရမယ် ... ပြီးတော့ ညစာစားပွဲတစ်ခုလည်း ဖိတ်ထားသေးတယ်နော် ... စောစောပြန်လာခဲ့ ...´´
တစ်ခါက ... တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေရတဲ့ဘ၀ကို မုန်းခဲ့ဖူးတယ်။ အခုတော့လည်း တစ်ယောက်တည်း နေရတဲ့ဘ၀ကို နဲနဲခုံမင်နေမိသလိုလို ...။ စိတ်တွေက အရိပ်တွေထက်အပြောင်းအလဲပိုမြန်တယ်။ လူဆိုတာ ရွှေငါးတစ်ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ စဉ်းစားမိတဲ့အခါတိုင်း အလှမွေးငါးကန်ထဲက ရွှေငါးတစ်ကောင် လောက်တောင် ကူးခတ်ခွင့်ဘောင်မကျယ်တဲ့ အချို့လူတွေကကျွန်တော့်ကို ခနဲ့တဲ့တဲ့အပြုံးတွေနဲ့ ပြုံးပြကြတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တောင်မပိုင်တဲ့ အရာတွေကို အပိုင်လိုချင်တဲ့သူတွေရှိလာတဲ့အခါ ...၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်တောင်မသေချာတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကို ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ချင်တဲ့သူတွေရှိလာတဲ့အခါ ...၊ ဘယ်လိုရှင်းပြရမယ်မှန်းမသိအောင်ကို စကားလုံးတွေရှားခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ နားလည်မှုဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာကလည်း သင်ကြားဖို့ခက်တဲ့ လက်ချာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။
`` လူပဲကွာ ... အမှားနဲ့ဘယ်ကင်းနိုင်မှာလဲ ... မမှားဖူးတာကအရည်အချင်းမဟုတ်ဘူးငါ့ညီရဲ့...။ အမှားကို အမှန်ပြင်နိုင်တာကမှ အရည်အချင်းကွ ...´´
ဘ၀တစ်ခုကို ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် ...။ အဲဒီဘ၀ထဲမှာ အသိနောက်ကျတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုက ပြင်လို့မရတဲ့ မှားယွင်းမှုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ တစ်ခုတည်းသောနောင်တက တစ်ဘ၀လုံးစာ မကအောင်ကို ကြီးမားသွားတာခက်တယ်။ အပြစ်တွေကို အနှစ်တွေဖြစ်အောင်အသွင်ပြောင်းပြီး မိန့်မိန့်ကြီးပြုံးနေကြသူတွေက ကျွန်တော့်ကိုအားပေးတယ်။ မမှားသောရှေ့နေ ... မသေသောဆေးသမား ... တဲ့။ တစ်ခါတည်းမှားပြီး တစ်ဘ၀လုံး နားသွားရတဲ့ အဖြစ်တွေကို ကျွန်တော်ပြန်တွေးမိတယ်။
`` ဘာတွေများထွေထွေထူးထူးစိတ်ညစ်စရာရှိနေလို့လဲ ... မင်းအဆင်ပြေနေတာပဲ ...´´
တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ စိတ်တွေကို ပြန်သစ်လို့မရတော့လို့ ညစ်နေတာပါ။ ထင်သာမြင်သာဖြစ်နေတဲ့ အဆင်ပြေခြင်းတွေအောက်မှာ ရင်ခုန်သံအပိုင်းအစတွေ ဘယ်လောက်ချောင်ပိတ်မိနေတယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူကသိမှာလဲ ...။ တစ်ခါက ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ အိပ်ပျော်ဖူးခဲ့တဲ့ကျွန်တော် ... အခု အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေရှိခဲ့ဖူးပြီ။ တခါက ... လက်ဖြန့်တောင်းခံသမျှအတွက် အမြဲအဆင်သင့် ဖြစ်နေတတ်တဲ့ကျွန်တော် ... အခု အပေါင်းအနှုတ်အတွက်အချက်တွေနဲ့ တွေဝေလက်တွန့်နေတတ်ခဲ့ပြီ။ တခါက ... မြေကြီးနဲ့တသားတည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ခြေထောက်တွေ ... အခု မြေကြီးကိုနင်းမိတဲ့ အချိန်တွေနည်းခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုက ပြောင်းလဲမှုတွေကို စိတ်နဲ့စစ်ယူဖို့ပျက်ကွက် ခဲ့တာပါ။
`` မင်း စာရောရေးဖြစ်သေးရဲ့လား ... မင်းရဲ့စာတွေ စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာမတွေ့ရတာကြာပြီနော် ...´´
သိပ်များများစားစားမရှိပေမယ့် ... ရှိခဲ့ဖူးတဲ့မှားယွင်းမှုတချို့က ကျွန်တော့်ရဲ့အာရုံတွေကို ခါးစေကြတယ်။ အတွေးတွေက အရင်ကလိုမစင်ကြယ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့လက်တွေကချရေးမယ့် စကားလုံးတိုင်းအတွက် ကျွန်တော့်မှာ ယုံကြည်ချက်တွေပါးလျနေကြပြီ။ ငါသိလာတဲ့ လောကရဲ့ဖြစ်ပျက်နေမှုတွေက တကယ့်အစစ်အမှန်တွေ ဟုတ်ရဲ့လား ...၊ အဲဒီ့ ပျက်ယွင်းနေကြတဲ့ စာရိတ္တတွေက တကယ့်ကို ရှောင်လွဲလို့မရနိုင်တဲ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ် ကုန်ပြီလား ...၊ နောက်ပြီး ... အချို့သော မျှတမှုမရှိတဲ့ တန်ဖိုးကြီးလူ့ကျင့်ဝတ်တွေကရော ... မလွဲမသွေပြုရမယ့် ၀တ္တရားတွေဖြစ်နေပြီလား ...။ တဝေေ၀တ၀ါးဝါး ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်တွေက ကျွန်တော့်ရဲ့လက်တွေကို တွန့်ဆုတ်စေကြတယ်။ ကျွန်တော်စာတွေ ပြန်ရေးဖြစ်ဦးမှာပါ ...။ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်အာရုံတွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ကျွန်တော် ပြန်သန့်စင်နိုင်ပြီလို့ ကျွန်တော်ပြန်ယုံကြည်လာတဲ့တစ်နေ့ပေါ့ ...။
ကန်ရေပြင်ပေါ်ကိုရွာချမိတဲ့မိုးတိမ်တစ်ခုက သူ့ရဲ့မိုးစက်တွေကိုနှမြောတသစွာနဲ့ညည်းတွားတယ် ...
`` ခြောက်သွေ့တဲ့ ကန္တာရတစ်ခုအပေါ်ရောက်အောင် ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့တွန်းမပို့ခဲ့တာလဲ လေညင်းရယ်`` တဲ့။
လေညင်းက ပြန်ပြောတယ် ...
``သတ်မှတ်ထားပြီးသား လားရာတွေအတိုင်း ငါတိုက်ခတ်နေရတာပါ´´ တဲ့။
အဲဒီ့လားရာတွေကို ဘယ်သူက သတ်မှတ်တာလဲလို့ မိုးတိမ်လေးကထပ်မမေးပါဘူး ...။ ဆက်နွယ်မှုတွေများစွာနဲ့ သက်ဝင်ဖြစ်တည်နေတဲ့ လောကမှာ ပတ်သက်မှုတွေများစွာက ကျွန်တော့်တို့ကို လာတွန်းထိုးဝင်တိုက်ကြမှာပဲလေ။ ဘယ်လို လောကဓံတရား တွေနဲ့ပဲကြုံကြုံ ကျွန်တော် အမြဲတမ်း ကြည်ကြည်လင်လင်လေးပဲပြုံးနေချင်ပါတယ်။ အဲဒီဆန္ဒတစ်ခုအတွက် ကျွန်တော့်မှာဘာလိုအပ်မှာလဲလို့ ကျွန်တော်ကို ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်။ အထပ်ထပ်အခါခါမေး ... အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ တွေးပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တော်အဖြေတစ်ခုကိုပြန်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ... အားလုံးနဲ့ ဝေးနေဖို့လိုလိမ့်မယ် ...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Sunday, November 04, 20077comments: